अमेरिकन आइडलको उपविजेता बने दिवेश, कसले जित्यो उपाधि ? — Imandarmedia.com
१देउवाले बोलाए कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठक
२‘नेकपा’ नामको विवादमा सुनुवाइ सकियो, के आयो सर्वोच्चले निर्णय ?
३सेफ’का उपविजेता सन्तोष साहलाई विमानस्थलमा पञ्चे बाजासहि स्वागत
४ओली समूह र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्छ- मोहनविक्रम सिंह
५शिक्षकले तलब नपाएको भन्दै विद्यार्थीले नै गरे विद्यालयमा तालाबन्दी
६ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित
७सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै
८बझाङमा काेराेनाकाे जस्तै लक्षण विद्यार्थी र शिक्षकलाइ देखापरेपछि विद्यालय बन्द
९नेपाली बजार फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
१०विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २५ लाख नाघ्यो
१२प्रचण्ड-नेपाल समूहको स्थायी कमिटि बैठक सकियो, भए यस्ता निर्णय
अमेरिकन आइडलको उपविजेता बने दिवेश, कसले जित्यो उपाधि ?
काठमाडौं । नेपाली युवा दिवेश पोखरेल (अर्थर गन) अमेरिकाको गायन रियालिटी शो अमेरिकन आइडलको उपाधि जित्न चुकेका छन् । दिवेशको चुनौति पन्छाउँदै जस्ट साम अमेरिकन आइडल बनिन् । दिवेश उपविजेता बने ।
काठमाडौंको रवीभवनमा जन्मेका दिवेश सन् २०१४ मा अमेरिका गएका हुन् । उपाधि विजेता २१ वर्षीया जस्ट सामको वास्तविक नाम समन्था डियाज हो । उनी लाइबेरियन मुलकी अश्वेत गायिका हुन् । न्यूयोर्क निवासी सामले मिडल स्कुलदेखि नै न्यूयोर्कका सब-वे र ट्रेनहरुमा गाउने गर्थिन् । उनी सानो छँदा आमा जेल परेकाले उनलाई हजुरआमाले हुर्काएकी हुन् ।
उनले पहिलो अडिसनबाटै निर्णायकहरुलाई प्रभावित तुल्याउँदै आएकी थिइन् । सामलाई जिताउनका लागि लाइबेरियामा अभियान नै चलाइएको थियो । काठमाडौंको रविभवनमा जन्मेका दिवेश सानैदेखि संगीतका पारखी थिए । स्कुल–कलेजका कार्यक्रमहरूमा गाउने गर्थे । यद्यपि, सांगीतिक क्षेत्रमा नै समर्पित भएर लागेको भने अमेरिका गएपछि मात्रै हो ।